U-Semalt Uyachaza Kungani I-Website Analytics Ibalulekile Ekukhuleni Kwebhizinisi Lakho
Umgomo osemqoka wokumaketha ophumelelayo ukwazi ikhasimende lakho futhi linxusa izidingo zabo. Ukuqwashisa ukuthi izivakashi zakho zewebhusayithi zifunani nokuthi ungazinikeza kanjani kungenza noma zibhidlize ibhizinisi. Amathuluzi wokuhlaziya iwebhusayithi angasiza kakhulu ekutholeni ukuthi yini eyenza izivakashi zakho zibeke uphawu nokuthi zingakuguqula kanjani ukuvakasha kwabo kube okuthengisayo.
Kulesi sihloko, sizochaza ukuthi yini ama-analytics e-web futhi kungani kubalulekile ekukhuleni kwebhizinisi lakho.
Yini i-Web Analytics?
I-Web Analytics ukuqoqwa kwemininingwane esekwe kuwebhu ukuthola imininingwane nokuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi nokuba khona online.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kubika ukuthi ngubani ovakashela isayithi lakho nokuthi izivakashi ziziphatha kanjani lapho sezikhona. Ngethuluzi elihle lokuhlaziya, ungathola ukuthi zindala kangakanani izivakashi zakho, abalingani babo, lapho bahlala, nokuningi. Ungathola futhi, ngokuchofoza inkinobho, ukuthi yini eholele kuwebhusayithi yakho, ukuthi bachitha isikhathi esingakanani lapho futhi kulawo makhasi, njll. Lolu hlobo lwedatha lubalulekile ekwenzeni iwebhusayithi yakho isebenze kahle ngangokunokwenzeka futhi ekwakheni okuqukethwe okukhangayo emakethe yakho eqondisiwe. Futhi, ungenza intuthuko nezinguquko ngokuya ngemibiko yokuhlaziywa kwewebhusayithi; lokhu kungasiza kakhulu ekukhuliseni ibhizinisi lakho.
Kungani ukuhlaziya iwebhusayithi kusiza?
Yazi izivakashi zakho futhi uthuthukise umuzwa wazo womsebenzisi!
Lapho uthatha izinqumo ngebhizinisi lakho, kubalulekile hhayi ukuthi unakekele ikhasimende lakho nje kuphela, kodwa lapho kungenzeka khona ukuthuthukisa ulwazi lwabo lomsebenzisi. Izinqumo ezinjalo kufanele futhi, ezimeni eziningi, zisebenze ukuheha amakhasimende amasha. Njengakho konke lokhu engqondweni, ukwazi izivakashi zewebhusayithi yakho kubalulekile ekwenzeni izinqumo ezifanele.
Uma unombono wesibalo sabantu abavakashela indawo yakho - okungukuthi ubulili babo, ibanga leminyaka, lapho bahlala khona, iziphi izintshisekelo zabo, njll - uzoba sesimweni esingcono sokuthuthukisa ulwazi lwabo lomsebenzisi. Ngendlela efanayo, uma ukwazi ukulandelela ukuthi imaphi amadivaysi, iziphequluli nezinhlelo zokusebenza izivakashi zakho zivame ukuzisebenzisa lapho zifinyelela isayithi lakho, uzokwazi ukubheka futhi uthuthukise ukuhambisana newebhusayithi yakho.
Isibonelo esilula ukuthi uma ulandelela iningi labavakashi bakho usebenzisa amadivaysi eselula, uzokwazi ukubeka phambili ukwenza iwebhusayithi yakho ibe nobungane. Ngokufanayo, uma amathuluzi akho we-analytics elandelela ubudala nobulili babavakashi bakho, ungaguqeka iwebhusayithi ukuze ibe wusizo kakhulu futhi uthandeke kubo.
Ukwazi izivakashi zakho kuyindlela enhle yokuvumelanisa iwebhusayithi yakho emakethe efanele. Ukuthuthuka kwalolu hlobo kuzokhuthaza abantu ukuthi bahlale kuwebhusayithi yakho isikhathi eside futhi, futhi, kuholele ezingeni eliphakeme lokuguqula.
Thola okuqukethwe kwakho okuphumelela kakhulu
Amathuluzi wokuhlaziya iwebhusayithi azogqamisa okuqukethwe kwakho okuhle kakhulu. Ungafunda ukuthi yikuphi okuqukethwe okuheha ukubukwa okuningi, ukuvakasha okude kakhulu, nokuthi yimaphi amakhasi abantu abavakashela ngemuva kwalokho. Ngezinye izindlela, ungabona kalula ukuthi yikuphi okuqukethwe okuphumelela kakhulu, kukuvumela ukuthi ukusebenzisele inzuzo yakho.
Isibonelo, uma usukhombe ucezu lokuqukethwe oludumile, ungangeza izixhumanisi zokuthenga, shaya izinkinobho zesenzo, njll. Ekhasini noma uqondise izivakashi kalula ekhasini lokubhalisa. Ukwazi nje ukuthi ugxilise kuphi imizamo yakho kuzokuvumela ukukhuphula izinga lokuguqulwa kwakho kanye nebhizinisi lakho jikelele.
Ngendlela efanayo, ungahle uhlele amakhasi aholayo bese ungeze imininingwane eminingi esesikhathini noma uqeda ukubukeka kwayo konke. Ngokwengeziwe, ungaphindisela okuqukethwe okuphumelelayo kuzo zonke iziteshi futhi ukuvumelanise nemidiya yezenhlalo, imibhalo ye-webinar, njll.
Futhi, ukulandela ukuthandwa kokuqukethwe kwakho kuzoqokomisa ukuthi yiziphi izingcezu ezingasebenzi kahle. Ungachitha isikhathi uthuthukisa okuqukethwe okungathandwa kangako, noma umane usebenzise ukuqonda lapho ukhiqiza okusha - okunenzuzo ngokwengeziwe - okuqukethwe.
Khulisa i-SEO yewebhusayithi yakho
I-search engine optimization (i-SEO) ibalulekile empumelelweni yewebhusayithi yakho ngakho-ke ibhizinisi lakho. Lapho likhuphuka inani lethrafikhi iwebhusayithi yakho ehehayo, liyanda inani lokuholwa nokuguqulwa.
Ukuhlaziywa kwewebhusayithi kungakhuthaza i-SEO yakho ngezindlela eziningi. Ngokuqonda izindawo ezinentshisekelo yezivakashi zakho kanye nenombolo yabantu, uyakwazi ukukhiqiza okuqukethwe okuhlosiwe bese uboniswa ku-Google nakwezinye izinjini zokucinga. Futhi, ukulandela ukulandelela kuzokunikeza ukuqonda kwe-backlinks.
Uma uhlanganisa ithuluzi lakho lohlaziyo ne-Google, ungalandelela imishwana yokusesha ekhiqiza ithrafikhi enkulu kuwebhusayithi yakho. Lokhu kuyasiza ekuqinisekiseni ukuthi lawo magama angukhiye nemisho asetshenziswa kokuqukethwe kwakho nemethadatha.
Ungahamba ngesinyathelo esisodwa futhi usebenzise umkhondo wokusesha isiza. Lokhu kukubonisa ukuthi izivakashi zifunani lapho zifika kuwebhusayithi yakho. Le nketho ye-analytics ikuvumela ukuthi ubone ukuthi okuqukethwe kwakho okukhona kufana nezidingo zabavakashi bakho. Ukwazi ukuthi uyahlangabezana noma akulindelanga okulindelwe kuzokuvumela ukuthi uguqule okuqukethwe kwakho ukuze unikeze umuzwa ongcono kakhulu womsebenzisi futhi uguqule izivakashi ukuba zibe amakhasimende Ungagqugquzela eminye imibono yokuthunyelwa okusha kwebhulogi, futhi.
Ukudluliselwa kobunikazi obuphezulu
Ama-analytics wewebhusayithi angakwazi ukulandelela lapho iningi lokudluliselwa kwakho kuvelaphi. Uma usukhombe izikhombisi zakho eziphezulu, ungasebenza ngamasu wokuwengeza nangaphezulu. Futhi, ukwazi izindawo zakho ezibuthakathaka kuzokuvumela ukuthi uzithuthukise futhi ukhiqize ithrafikhi ethe xaxa kusayithi lakho.
Uma, ngokwesibonelo, iwebhusayithi yakho ithola izivakashi zayo eziningi ezivela ezinjini zokusesha, lokhu kukutshela ukuthi i-SEO yakho isebenza kahle. Uma ngakolunye uhlangothi, izivakashi zakho zivame ukuqhamuka ezikhangisweni ze-Facebook futhi zingafani nhlobo nezinjini zokucinga, ungenza okuningi ekhasini lakho le-Facebook ngenkathi futhi uhlanganisa i-SEO yakho ukuze usebenzise kangcono izinjini zokucinga.
Yazi izixhumanisi zakho eziphumayo
Kanye nokuthola lapho kudluliselwa khona, ama-analytics wewebhusayithi azokutshela ukuthi ukhuluma nobani, ngenye indlela njengezixhumanisi eziphumayo. Uma usufake kuhlu izixhumanisi zakho eziphumayo eziphambili, ungasebenzisa lolu lwazi ukuxhumana nabanikazi bewebhusayithi futhi uphakamise ukusebenzisana.
Ukusebenzisana namanye amabhizinisi kungasiza okwakho ukukhula. Ukuphromotha kanye nezincomo ezilinganayo ziyizindlela ezinhle zokuzuzisa womabili amabhizinisi akho ekubambisaneni. Ukwazi ukuthi yikuphi ukusebenzisana kwebhizinisi okuzoba nezithelo kakhulu kuwe, futhi kubo, isinyathelo sokuqala ekwakheni lobu budlelwano obalulekile. Ungasondela kubhizinisi eliqondiwe bese wabelana nabo ngombiko wokuhlaziya, ubenze bavume isiphakamiso sakho.
Landelela amamethrikhi e-commerce
Ibhizinisi lakho lingathengisa izinsiza, imikhiqizo, isoftware noma okuthile okuhlukile konke ndawonye. Noma yini oyithengisayo, umbiko wakho wokuthengisa wewebhusayithi uwumbiko obalulekile ukuze ujwayele. Ungabona ukuqonda okubalulekile okufana namanani wokuguqula, ukudluliswa okuphezulu, imali ephelele nemikhiqizo ehamba phambili, njll. Konke kungumbiko owodwa. Lapho wazi, ngokwesibonelo, ukuthi yini umkhiqizo wakho oholayo, ungagxila emizamweni yakho ekuthuthukiseni leyo mikhondo ehlukahlukene. Ukuxhumana njalo nenqubo yokudlulisela kuyasiza futhi ekuhleleni ukusebenzisana okuzayo okuzoholela ekuthengisweni okuningi. Ukulandelela amamethrikhi akho we-e-commerce kuyingxenye edingekayo yokukhulisa ibhizinisi eliphumelelayo.
Yiliphi ithuluzi leWeb Analytics okufanele ngilisebenzise?
Kunamathuluzi amaningi we-analytics wewebhusayithi atholakalayo futhi kubalulekile ukukhetha ithuluzi eliphelele enkampanini ethembekile nehlonishwayo. I-Semalt Web Analytics inikezela ngamathuluzi ahlukahlukene wokuqonda ukusiza ibhizinisi lakho ukukhula.
Yasungulwa ngonyaka ka-2013, iSemalt iyinhlangano ejikeleza esigcwele esigcwalisiwe esigcwele. Banikezela ngamathuluzi ewebhu ezinsizakalo zokuhlaziya ezisezingeni eliphakeme kanye nohlu lwe-SEO namanye amasevisi e-web. ISemalt inamakhasimende amaningi anelisekile, amaningi awo ashiye ukubuyekeza okubhaliwe nevidiyo kuwebhusayithi yenkampani.
I-Semalt ingakusiza ku:
Bheka amazinga akho wewebhusayithi
Hlola ukubonakala kwesayithi lakho online
Phenya amawebhusayithi ancintisanayo
Khomba amaphutha okusebenziseka ekhasini
Thola imibiko ebanzi yewebhusayithi ebanzi
Iqembu eSemalt likhuluma izilimi eziningi kufaka phakathi isiNgisi, isiFulentshi, isiNtaliyane, isiTurkey, nabanye abaningi, ngakho-ke ungakhathazeki ngokuthi ulimi lungumgoqo phakathi kwakho nokukhula kwebhizinisi lakho. Amalungu eqembu angoti emkhakheni wakho futhi alungele ukuthatha imibuzo yakho.
Ngo-2014, iqembu leSemalt lathuthela ehhovisi elisha. Lapho befika, bamangala ukuthola ufudu endaweni yokudla yezimbali. Ngemuva kokwenza uphenyo, bathola ukuthi umnikazi wehhovisi langaphambili wayengumnikazi wakhe kodwa abasamfuni. Iqembu lajabula kakhulu ukuthola elinye ilunga. Babelugcinile ufudu futhi bambiza ngoTurbo. Bachitha isikhathi befunda ngokudla okungcono kakhulu kwamafudu nokuthi angazinakekela kanjani futhi ngokushesha amthengela i-aquarium entsha. Manje, uhlala ejabule ehhovisi leSemalt futhi unyuselwe enkampanini yamascot.
Ukuthola ukuqondana nokuhlaziywa kwewebhusayithi kungenza umehluko phakathi kwebhizinisi lakho elikhulayo, ukugudla ulwandle noma ukwehluleka. Ukwazi izivakashi zakho nokuthi zifunani kuyisihluthulelo sokukhulisa ubukhona bakho be-inthanethi nokumaketha umkhiqizo wakho ngempumelelo. Ukukhetha ithuluzi elaziwa njengeSemalt Web Analytics kuzokuvumela ukuthi ulandelele okuqukethwe kwakho nempumelelo yokuthengisa, wazi ukubalwa kwezivakashi zakho futhi, okubaluleke kakhulu, uthuthukise ukuvakasha kwakho kwizinga lokuguqula ukuthengisa.